Tag: igwe ojii | Martech Zone
Na njedebe nke afọ a, ihe karịrị 80% nke ndị okenye America ga-enwe ama. Ekwentị mkpanaka na-achịkwa ala B2B na B2C yana ojiji ha na-achịkwa ahịa. Ihe niile anyị na - eme ugbua nwere ihe mkpanaka na ya nke anyị ga - etinye n’ime usoro ahịa anyị. Gịnị bụ Mobile Marketing Mobile marketing bụ ahịa na ma ọ bụ jiri ekwentị mkpanaaka, dị ka smart ekwentị. Ahịa ahịa nwere ike inye ndị ahịa oge na ọnọdụ